एपीएफद्वारा उपाधिमा ह्याट्रिक : RajdhaniDaily.com -
सर्लाहीलाई प्रदेश २ को राजधानी बनाउन माग
काठमाडौं । प्रदेश २ को स्थायी राजधानीबारे निर्णय गर्न राजनीतिक दल असफल भएका बेला सर्लाहीमा स्थायी राजधानी तोकिनुपर्ने भन्दै आवाज उठेको छ । स्थायी राजधानी...
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आज भएको दोस्रो दिनको वार्ता सकिएको छ । नक्सालमा...
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालबीच मेरियट होटलमा भेटवार्ता सुरु भएको छ । बुधबार साँझ दुई नेताबीच मेरियट होटलमा...
ओली र नेपालबीच आज दोस्रो वार्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच दोस्रो वार्ता आज पनि हुँदैछ । होटल मेरियटमा दिउँसो...
महेश्वर गौतम - April 22, 2021 0
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका...
धनकुटा नगर क्षेत्रका विद्यालय नौ दिन बन्द गरिने
ईपीजी प्रतिवेदन टुंगोमा पु-याऊ
सीमारेखा झट्ट हेर्दा एउटा देशको सीमाजस्तो देखिए पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमांकन हो । नेपाल–भारतबीच रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अद्यावधिक गर्न लामो फिल्ड वर्कसहित दुवै देशका...
ऐंजेरुविहीन सुन्दर राजनीति कस्तो होला ?
श्रीप्रसाद प्रसाईं - April 21, 2021 0
अहिले मुलुकको राजनीति ऐंजेरुले घेरिएको सुगन्धित वृक्षजस्तो छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई कुरूप अवस्थामा पु¥याउने ऐंजेरुपालक नेताहरू पनि जनताको नजरमा चिनिँदै आएका छन् । नेताकै...
प्रतिजैविक सहनशील जीवाणुको बिगबिगी
डा. केदार कार्की - April 21, 2021 0
पृष्ठभूमि जीवाणु ढुसी तथा एकटोमाइसेट तथा सूक्ष्म जीवाणुबाट उत्पादित तत्वलाई एन्टिबायोटिक प्रतिजैविक भनिन्छ । जसले जीवाणु तथा ढुसीजन्य मानिस तथा पशुपक्षीका रोगका कारक तत्वलाई मार्ने...
Home खेल एपीएफद्वारा उपाधिमा ह्याट्रिक
एपीएफद्वारा उपाधिमा ह्याट्रिक
काठमाडौं । विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले ढोरपाटन महिला डबल लिग भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि रक्षा गरेको छ । बुधबार डबल राउन्ड रोविनको लिगको अन्तिम खेलमा अर्काे विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले अपराजित रहेर उपाधि रक्षा गरेको हो ।
यस्तै, एपीएफले लगातार तीनपटक च्याम्पियन बन्दै रनिङ सिल्ड कब्जा गरेको छ । ढोरपाटन लिगमा सातपटकको च्याम्पियन बनेको एपीएफले १३औं र १४औं संस्करणको च्याम्पियन बनेको थियो ।
त्यसअघि एपीएफले आठौंदेखि ११औं संस्करणसम्म च्याम्पियन बन्दै रनिङ सिल्ड कब्जा गरेको थियो । एपीएफपछि पोखराको ज्ञानुबाबा स्कुलले सर्वाधिक पाँचपटक ढोरपाटन लिग जितेका छन् । ज्ञानुबावा दोस्रोदेखि छैटांै संस्करणसम्म च्याम्पियन बनेको थियो । त्यसपछि सातौंमा पुलिस च्याम्पियन बनेको थियो । १२औं संस्करणमा भारतीय खेलाडी सम्मिलित रिड मोडल च्याम्पियन बनेको थियो । पहिलो संस्करणमा पुरुषको प्रतिस्पर्धा हुँदा आर्मीले बाजी मारेको थियो ।
यस्तै, एपीएफ यो सिजनको पाँचांै उपाधि जित्न सफल भएको छ । एपीएफले यो सिजन आठौं राष्ट्रिय खेलकुद, शेरबहादुर स्मृति भलिबल, न्यु डायमन्ड कप र एनभीए क्लब च्याम्पियनसिप जितेको थियो । एपीएफसँग पराजित भएसँगै पुलिसको वर्षको दोस्रो उपाधि जित्ने सपना चकनाचुर बन्यो । पुलिसले यो सिजन पोखराको लामाचौरमा सम्पन्न तीज भलिबलको उपाधि जितेको थियो । लिगको १४ खेलपछि अपराजित रहेको एपीएफले ४१ अंक जोड्यो । उति नै खेलबाट ३७ अंक जोडेको पुलिसले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझायो ।
नयाँ बासपार्कस्थित ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबको भलिबल कोर्टमा बुधबार एपीएफ र पुलिसबीचको अन्तिम खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अनुमान गरिए पनि एपीएफले सहज जित निकाल्न सफल भयो । सुरुवातमा पछि परेर पनि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै एपीएफले पहिलो सेट २५–२१ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । दोस्रो सेटमा सुरुवातमै फराकिलो अग्रता लिएर पुलिसले पुनरागमन प्रयास गरे पनि एपीएफ २५–२१ ले नै विजयी हुन सफल भयो । तेस्रो सेटमा २५–१९ को जित निकाल्दै एपीएफ च्याम्पियन बन्न सफल भयो ।
त्यसअघि तेस्रो भइसकेको त्रिभुवन आर्मी क्लबले होङ्ग्वान्जी न्यु डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई ३–० को सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो । मुख्य स्पाइकर प्रतिभा मालीबिना कोर्टमा उत्रिएको डायमन्ड यसपटक निकै फिका देखिएको थियो । प्रतिभाको अनुपस्थितिमा टोली आर्मीसँग २५–२१, २५–१४ र २५–१४ ले पराजित भयो । उपाधिसँगै एपीएफले ४ लाख ५ हजार रुपैयाँ हात पा¥यो । दोस्रो भएको पुलिसले २ लाख ५ हजार तथा तेस्रो भएको आर्मीले १ लाख ५ हजार रुपैयाँ तथा चौथौ भएको डायमन्डले ७५ हजार रुपैयाँ हात पा-यो ।
पाँचाैं भएको चितवनले ५५ हजार तथा छैटौं भएको बुलबुले रारा भलिबल क्लबले ३५ हजार रुपैयाँ पायो । चार विधा सर्वाेत्कृष्ट खेलाडी, उदीयमान खेलाडी, वर्ष खेलाडी तथा ग्रेट अचिभमेन्ट हुने खेलाडीले यूएम स्कुटर हात पारिन् । यस्तै, लक्की ‘ड्र’बाट चितवनका अनिल बुढाथोकीले भाग्यशाली दर्शक बन्दै एक थान मोटरसाइकल हात पारे । व्यक्तिगत विधातर्फका उत्कृष्ट हुनेले समान ७ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
प्रतियोगिताको विजयी टोली तथा खेलाडीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल, नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा, महासचिव जितेन्द्रबहादुर चन्द, नेदरल्यान्ड भलिबलका डेभलपमेन्ट म्यानेजर पिटर भान तरेल, ढोरपाटन क्लबका अध्यक्ष तथा संघका सचिव मनवीर छन्त्याललगायतले पुरस्कृत गरे । गत १६ माघबाट सुरु भएको प्रतियोगितामा १० टोलीले डबल राउन्ड रोविन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दोस्रो राउन्डमा ६ टोलीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
रेम्डेसिभिर, खोप र अक्सिजन अभाव
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै तीव्र फैलिँदै जाँदा रोकथाममा अत्यावश्यक मानिने खोप, रेम्डेसिभिर र अक्सिजन चरम अभाव खड्किएको छ । दैनिक संक्रमणदर २ हजारमाथि पुगे...
मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीकाे नाम प्रस्ताव
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलकै सरकारमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र), प्रमुख विपक्षी दल...
२६ वर्षदेखी फरार अभियुक्त पक्राउ
सप्तरी, राजविराज । बैकिङ कसुर मुद्दामा अदालतबाट कैद सजाय तोकिएका एक फरार प्रतिवादी शुक्रबार पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा राजविराज १६ निवासी करण...
‘नो मास्क,’ ‘नो इन्ट्री’
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रुलाई अबदेखि ‘नो इन्ट्री’ गरिनेछ । कोरोना नयाँ प्रजाति तीव्र फैलिएसँगै यातायात व्यवसायीले मास्क नलगाउने यात्रुलाई गाडीमा नचढाउने...
लोभलाग्दो ‘बाहुबली’ झरना
काभ्रेपलाञ्चोक । रोसी गाँउपालिका–२ काफलडाँडा स्थित तीनधारे झरनाको चर्चा एकाएक चुलिएको छ । केही समय अघिसम्म गुमनाम झरना हेर्न दैनिक हजारौँ मानिस आउजाउ गर्न...
काठमाडौं महानगरपालिकाको नयाँ नीति : पहिला श्रम, त्यसपछि मात्रै राहत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी लकडाउनका कारण बिहान–बेलुकीको छाक जोहो गर्न कठिन हुने मजदुर वर्गलाई लक्षित गरी राहतका लागि श्रम गर्नुपर्ने कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको...
हरिपुर नगरपालिका १५ दिनसम्मको लागि पूर्ण रुपमा सिल
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - August 19, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा कोभिड–१९ का संक्रमित व्यक्तिहरुको संख्या बढन थालेपछि नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनसम्मको लागि पूर्ण रुपमा सिल गर्ने...
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - September 27, 2020 0
काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले आज प्रदेश नं १ र २ का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान...
राजधानी दैनिकका कार्यकारी सम्पादक पण्डित सम्मानित
समाज Prem Shyangtan - March 9, 2020 0
काठमाडौ । रौतहट टाइम्स साप्ताहिकले आफ्नो २२ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा राजधानी दैनिकका कार्यकारी सम्पादक सागर पण्डित लगायत तीनजनालाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेहरुमा...
४१ विधामा हिमालयन म्युजिक अवार्ड
Not-to-be-missed Kumar Raut - March 10, 2020 0
काठमाडौं । तेस्रोे संस्करणको ‘हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली म्युजिक अवार्ड–२०७६’ विभिन्न ४१ विधामा प्रदान गरिएको छ । विदेशमा गरिने भनिएको यो अवार्ड कोरोनाकै कारण नेपालमा...
फास्ट ट्र्याकको उल्झन: सेनाका २५ र २७ अर्बका ठेक्कामा अनियमितताको आशंका
Breaking News महेश्वर गौतम - March 22, 2021 0
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं– तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को २५ र २७ अर्बको दुई वटा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा संसद्को...
साझा पार्टीले भन्यो, नेपाल–भारत सिमाना तारबार सहित बन्द गर
राजनीति Dhruba Lamsal - May 15, 2020 0
काठमाडौं । साझा पार्टीले नेपाल–भारत सिमाना तारबारसहित बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले सीमा क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दालाई...
काठमाडौंका धारामा आइतबारबाट मेलम्ची पानी
Breaking News टेनिस रोका - March 26, 2021 0
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची पानी काठमाडौंवासीका धारामा बल्ल झर्ने भएको छ । सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौंका धारामा मेलम्ची पानी छाड्ने तयारी गरेको हो । काठमाडौं...
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए ८१७ जना कोरोना संक्रमित
Breaking News Sushila Bishwokarma - September 28, 2020 0
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा ८१७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा मात्रै ६४९ जनामा सङ्क्रमण...
चैतको दोस्रो साताबाट उपत्यकावासीले दैनिकरूपमा धारामा पानी पाउने
Editor-Picks सञ्चिता घिमिरे - March 11, 2021 0
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आएसँगै काठमाडौँ उपत्यकावासीको घरघरमा दैनिकरूपमा पानी आउने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले चैतको दोस्रो साताबाट दैनिकरूपमा नै पानी...
दैनिक ज्यालादारीलाई परिवार पाल्नै धौधौ
Editor-Picks Kumar Raut - March 27, 2020 0
काठमाडौं । रामेछापका कृष्ण खड्कालाई ‘परिवार कसरी पाल्ने ?’ भन्ने पिरलोले सताउन थालिसक्यो । काठमाडौं मैतिदेवी डेरामा परिवारसहित बस्दै आएका उनी २० वर्षदेखि...
ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव नेपाल समुहले बोलायो सांसदहरुको बैठक
अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल
रबिन कटेल - April 22, 2021
प्रशान्त वली - April 19, 2021
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्याे, विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ : अध्यक्ष भण्डारी
राजधानी समाचारदाता - April 16, 2021
वैशाखमा परेको हिउँले जुम्लाका स्याउ बगैंचामा क्षति